Teny tsara indrindra avy amin'i Volodymyr Zelenskyy - Victor Mochere
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Volodymyr Zelenskyy.
“Araka ny vaovao azonay, nomarihin'ny fahavalo ho lasibatra laharana voalohany aho, laharana faha-1 ny fianakaviako. Te-handrava ara-politika an'i Okraina izy ireo amin'ny famotehana ny filoham-panjakana. Manana vaovao izahay fa niditra tao Kyiv ireo vondrona sabotage fahavalo.” – Volodymyr Zelenskyy
"Ny vola rehetra ananako dia nataoko tamin'ny talentako." – Volodymyr Zelenskyy
“Fa raha iharan'ny fanafihana isika, raha miatrika fikasana hanesorana ny firenentsika, ny fahafahantsika, ny fiainantsika ary ny ain'ny zanatsika, dia hiaro tena isika. Rehefa manafika anay ianareo, dia ho hitanao ny tavanay. Tsy ny lamosinay, fa ny tavanay”. – Volodymyr Zelenskyy
“Ny Chernobyl dia ampahany ratsy amin'ny marika Okraina. Tonga ny fotoana hanovana izany.” – Volodymyr Zelenskyy
“Toerana iray tsy manam-paharoa eto amin'ny planeta i Chernobyl, izay hiveloman'ny natiora taorian'ny loza nateraky ny olombelona maneran-tany, izay misy ny tena 'tanàna matoatoa'." – Volodymyr Zelenskyy
“Ny firaketana an-tsoratra am-polony maro no manaporofo fa tsy volley sandoka tokana izany, fa ny fandringanana an-tsitrapo ny vahoaka. Fantatry ny Rosiana izay tifiriny.” – Volodymyr Zelenskyy
“Isan'andro dia manomboka amin'ny SMS avy amin'ny Staff General ny androko. Tao anatin’ny 24 ora izay dia in-7 ny tifitra variraraka ary roa no maty. Mety tsy hitovy ny tarehimarika, fa ny tarehimarika iray ihany no mahatsara ny maraina. Zero izany. Ny tifitra dia aotra. Ny fatiantoka dia aotra. – Volodymyr Zelenskyy
“Ny finoana dia zavatra tsy resahinay mihitsy eo amin’ny latabatra fisakafoanana ao amin’ny fianakaviako, fa mino an’Andriamanitra aho.” – Volodymyr Zelenskyy
"Raha ny marina, tokony haniry izany i Rosia, mba hamerenana ny faritanintsika, ny tanintsika." – Volodymyr Zelenskyy
"Ho fanomezam-boninahitra ny fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny Fandripahana Tambabe, izay nahafatesana Jiosy Okrainiana maherin'ny roa tapitrisa, dia niantso an'i Israely i Okraina mba hanaiky ihany koa ny Holodomor ho toy ny fandripahana ny vahoaka Okrainiana." – Volodymyr Zelenskyy
“Ahoana no ahafahako ho Nazi? Hazavao amin'ny raibeko izany, izay nandalo ny ady manontolo tao amin'ny tafika sovietika, ary maty kolonely tany Ukraine mahaleo tena. Tenenina ianao fa mankahala ny kolontsaina Rosiana izahay? Ahoana no ahafahan'ny olona iray mankahala kolontsaina? Misy kolontsaina ve? Ny mpifanolo-bodirindrina hatrany dia mifampanan-karena ara-kolontsaina, saingy tsy mampitovy azy ireo izany, tsy mandrava anay ao anatinao. Tsy mitovy isika. Tsy antony tokony ho fahavalo anefa izany. Te hamantatra ny tantarantsika irery izahay. Ao anatin’ny fiadanana, tony ary amim-pahamarinana.” – Volodymyr Zelenskyy
"Izaho dia olona miasa amin'ny fe-potoana farany." – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy mpanao politika aho. Izaho dia olona tsotra tonga handrava ity rafitra ity.” – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy miezaka mitana anjara toerana aho. Mahatsapa tsara ny tenako aho ary milaza izay heveriko. " – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy te hitsabaka amin'ny fifidianana any Etazonia aho.” – Volodymyr Zelenskyy
“Fantatro fa be dia be ny vaovao diso sy tsaho miely ankehitriny. Indrindra indrindra, voalaza fa nandao an'i Kyiv aho. Mijanona eto an-drenivohitra aho, miara-mipetraka amin’ny vahoakako. Tsy mpamadika ny fianakaviako, fa olom-pirenena Okraina. Araka ny vaovao azonay dia nomarihin’ny fahavalo ho isan’ny lasibatra aho. Ny fianakaviako no tanjona voalohany. Te-hanimba an'i Okraina amin'ny lafiny politika izy ireo amin'ny famotehana ny Filoham-pirenena.” – Volodymyr Zelenskyy
“Tena tsy tiako ny sariko ao amin'ny biraonareo, satria ny Filoha dia tsy sary masina, sampy na sary. Ahantona kosa ny sarin’ny zanakao, ary jereo izany isaky ny mandray fanapahan-kevitra ianao.” – Volodymyr Zelenskyy
“Manaja an'i Israely ho tena miavaka aho, indrindra amin'ireo fahatsapana rehetra manodidina azy. Ny Jiosy dia nahavita nanorina firenena iray, nanandratra azy, tsy nisy na inona na inona afa-tsy ny olona sy ny atidoha. – Volodymyr Zelenskyy
“Heveriko fa reraky ny Burisma avokoa ny rehetra ao Okraina. Manana ny tanindrazantsika isika. Manana ny fahaleovantenay izahay, manana ny olanay sy ny fanontanianay izahay. ” – Volodymyr Zelenskyy
"Te hanao zavatra aho hanovana ny tsy fahatokisana ny mpanao politika." – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy hanaiky handeha hiady any Donbass aho. Fantatro fa be dia be ny olona mafana fo, indrindra fa ireo manao famoriam-bahoaka manao hoe: 'Andao hiady ary handresy izany rehetra izany!' Inona anefa no vidiny? Inona no vidiny? Tantara hafa momba ny fiainana sy ny tany izany. Ary tsy hanao izany aho. – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy tiako mihitsy ny hahatonga an'i Okraina ho ampahany amin'ny sarintany, eo amin'ny solaitrabe misy mpilalao lehibe eran-tany, mba hahafahan'ny olona iray manipy anay, mampiasa anay ho saron-tava, ho ampahany amin'ny varotra." – Volodymyr Zelenskyy
“Matoky aho fa amin'ny ho avy, ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao dia hanaiky fa loza lehibe ho an'i Okraina i Holodomor, ary tena fandripahana ny vahoaka Okrainiana tokoa izany.” – Volodymyr Zelenskyy
“Izaho no karazana olona mamaly ny zava-misy.” – Volodymyr Zelenskyy
“Raha mihaona amin'i Putin aho, dia holazaiko aminy hoe: 'Noho izany dia naverinao taminay ny faritaninay, tsy mainka ve ianao vonona hanome vola ho tambin'ny fanalana ny taninay sy hanampiana ireo izay nandray anjara tamin'ny firongatry ny tany. any Crimea sy Donbass?'” – Volodymyr Zelenskyy
“Raha tsy misy tafika matanjaka Okrainiana dia tsy hisy Okraina, ary izany no hitranga rehefa ho azon'ny rehetra… tsy ny ady ao Okraina fa ny ady any Eoropa. Miaro ny tanindrazantsika isika. Tsy manafika na iza na iza izahay, satria maloto fitondran-tena izany. – Volodymyr Zelenskyy
“Raha mahita an'i Okraina ao amin'ny OTAN ry zareo [Etazonia] dia tsy maintsy miteny mivantana ary manao izany. Tsy teny.” – Volodymyr Zelenskyy
"Tamin'ny asako teo aloha, fony aho mpamokatra, mpanoratra sy mpilalao sarimihetsika, te-hahazo Oscar, te-ho malaza any Etazonia aho" – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy misy adin’olon-kafa intsony eto amin’izao tontolo izao misy antsika. Tsy misy aminareo afaka mahatsapa ho voaro rehefa misy ady any Ukraine, rehefa misy ady any Eoropa.” – Volodymyr Zelenskyy
“Fandresena izany rehefa mangina ny fitaovam-piadiana ary miteny ny olona.” – Volodymyr Zelenskyy
“Andao hanangana firenena misy fahafahana, izay hitovizan'ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna ary ny fitsipiky ny lalao dia marina sy mangarahara, ary mitovy ho an'ny rehetra." – Volodymyr Zelenskyy
“Andao hojerentsika ireo olona izay tsy miteraka resabe amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy. Andeha hotononintsika ny tsangambato sy ny arabe ho an’ireo olona tsy miteraka fifandirana ny anarany.” – Volodymyr Zelenskyy
"Ny fifidianana nataoko dia manaporofo fotsiny fa leo ny olom-pirenena amin'ireo mpanao politika efa za-draharaha izay nandritra ny 28 taona lasa dia namorona firenena misy fahafahana - fahafahana mangalatra, manao kolikoly ary mandroba." – Volodymyr Zelenskyy
“Ny mpifanolo-bodirindrina hatrany no mifanankarena ara-kolontsaina. Na izany aza, tsy mahatonga azy ireo ho iray manontolo izany. Tsy manafoana anay ao aminao [Rosia] izany.” – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy misy na iza na iza eto amin'izao tontolo izao hamela anao [Vladimir Putin] tamin'ny famonoana ny vahoaka Okrainiana milamina.” – Volodymyr Zelenskyy
“Ankehitriny, raha resaka fandrahonana any an-dafin'ny sisintanin'i Okraina, dia misy zavatra tena matanjaka manakana azy. Izany no Andininy faha-5 ao amin'ny OTAN: Ny fanafihana iray dia fanafihana ny rehetra. – Volodymyr Zelenskyy
"Zavatra iray ihany no mijanona tsy miova ny fifanoherana eo amin'ny firenena sy ny fanjakana izay mbola voavaha tsy amin'ny teny, fa amin'ny balafomanga. Tsy amin’ny teny. Fa amin’ny ady.” – Volodymyr Zelenskyy
“Ny hamaranana izao famonoana izao no tena tanjonay. Mafy tokoa ny fahavoazan'ny fahavalo – androany dia nisy miaramila an-jatony maty niampita ny sisin-taninay ary tonga teto amin'ny taninay. Indrisy anefa fa iharan’ny fatiantoka ihany koa izahay.” – Volodymyr Zelenskyy
“Ny miaramilanay, ny zandarimariam-pirenenay, ny polisim-pirenenay, ny fiarovana ny faritaninay, ny fanompoana manokana, ny olom-pirenen'i Ukraine, tohizo azafady. Handresy isika. Voninahitra ho an'i Okraina. Tazoninay soa aman-tsara ny fanafihan’ny fahavalo. Fantatray fa miaro ny taninay sy ny hoavin’ny zanakay izahay. Kyiv sy ireo faritra manan-danja dia fehezin'ny tafikay. Te-hametraka ny saribakoliny eto an-drenivohitsika ny mpibodo. Tsy nahomby izy ireo. Teny an-dalambenay dia nisy ady sahaza nitranga. ” – Volodymyr Zelenskyy
“Ny fitaovam-piadiantsika dia ny fahamarinanay, ary ny fahamarinanay dia mitoetra ao amin'ny zava-misy fa ity no taninay, ity ny tanindrazantsika, ny zanatsika, ary isika dia hiaro izany rehetra izany… Voninahitra ho an'i Okraina!” – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy mino ny teny ny olona mandritra ny fotoana fohy. Avy eo dia manomboka mitady hetsika izy ireo. " – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy tena mino ny teny ny olona. Na ny marina, ny olona mino ny teny mandritra ny fotoana fohy. Avy eo dia manomboka mitady hetsika izy ireo. " – Volodymyr Zelenskyy
“Azafady, atsaharo ny filazana fa firenena mpanao kolikoly i Okraina, satria manomboka izao dia tsy marina izany. Te hanova io sary io izahay.” – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy siansa marina ny politika. Izany no nahatonga ahy tany am-pianarana ho tia matematika. Nazava tamiko ny zava-drehetra momba ny matematika.” – Volodymyr Zelenskyy
“Nanafika tanàna milamina i Rosia. Toeram-ponenana milamina. Tsy misy trano miaramila.” – Volodymyr Zelenskyy
“Herinandro maromaro lasa izay, nilaza izahay fa efa niditra an-tsokosoko tany Okraina ny masoivoho Rosiana; niasa tao anatin’ny firenena izy ireo.” – Volodymyr Zelenskyy
“Eto ny ady; Mila bala aho fa tsy mitaingina.” – Volodymyr Zelenskyy
“Maniry fiadanana ny vahoakan'i Okraina. Maniry ny fandriampahalemana ny governemanta ao Okraina ary manao izay rehetra azony atao mba hananganana izany.” – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy afaka manova samirery ny firenena ny filoha. Inona anefa no azony atao? Afaka manome ohatra izy.” – Volodymyr Zelenskyy
"Ny firenena Okrainiana, tsy misy firenena hafa, dia mahatakatra sy mahafantatra tanteraka ny loza sy ny haben'ny ain'ny Jiosy Okrainiana namoy ny ainy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa." – Volodymyr Zelenskyy
“Loza lehibe ny ady, ary lafo be io loza io. Miaraka amin'ny dikan'io teny io. Very vola, laza, kalitaon'ny fiainana, very fahalalahana ny olona. Fa ny tena zava-dehibe dia ny mamoy ny olon-tiany ny olona, ​​​​mamoy ny tenany izy ireo. " – Volodymyr Zelenskyy
"Tsy nisy fanerena na fanenjehana avy any Etazonia tsy fantatro fa notazonina ny fanampiana miaramila." – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy maintsy hisy fitsarana ho an'ity heloka bevava ity [fanafihana amin'ny tanàna Okrainiana milamina]. Iraisam-pirenena. Fanitsakitsahana ny fivoriambe rehetra izany.” – Volodymyr Zelenskyy
"Ity dia lehibe kokoa amin'ny habeny sy ny velarana amin'ny fangaron'ny hery noho ny zavatra hitanay tato ho ato, ary heveriko fa tsy maintsy miverina vetivety amin'ny andron'ny Ady Mangatsiaka ianao raha te hahita zavatra mitovy amin'izany." – Volodymyr Zelenskyy
"Ho sarotra be izao alina izao, ary hampiasa ny hery rehetra misy ny fahavalo handrava ny fanoheran'ny Okrainiana, ny anjaran'i Okraina dia tapa-kevitra amin'izao fotoana izao." – Volodymyr Zelenskyy
"Ho an'ny firenena rehetra ao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha: jereo izahay fa azo atao ny zava-drehetra." – Volodymyr Zelenskyy
“Androany, noho ny fandraisana andraikitra nataon'ny Rosiana, dia natao ny fihodinana voalohany tamin'ny fifampiresahana teo amin'i Okraina sy Rosia. Ireo lahateny ireo dia natao nandritra ny fandarohana baomba ny faritanintsika sy ny tanànantsika, ary nodarohana baomba. Hitanay ny fampifanarahana ny tifitra variraraka amin'ny fizotran'ny fifampiraharahana. Mino aho fa amin'ity fomba tsy dia raitra ity no iezahan'i Rosia hanery. Aza mandany fotoana. Tsy manaiky tetika toy izany izahay. Ny fifampiraharahana ara-drariny dia mety hitranga rehefa tsy mamely ny ilany amin'ny balafomanga ny andaniny amin'ny fotoanan'ny fifampiraharahana. " – Volodymyr Zelenskyy
“Manana fifandraisana ara-tantara efa ela i Okraina sy Israely. Niarahan’ny firenentsika niaina ny zava-doza rehetra teo amin’ny tantara vao haingana – ny Holodomor sy ny Holocaust, ny Ady Lehibe Faharoa, ary ny fitondrana sovietika tsy refesi-mandidy.” – Volodymyr Zelenskyy
“Eto daholo isika, miaro ny fahaleovantenantsika, ny firenentsika. Ary hijanona ho toy izany. Voninahitra ho an'ireo lehilahy sy vehivavy miaro antsika. Voninahitra ho an'i Okraina. Voninahitra ho an’ireo mahery fo.” – Volodymyr Zelenskyy
“Tsy mitovy isika [miaraka amin'ny Rosiana], saingy tsy antony tokony ho fahavalo izany. Tianay ny hamaritra, hanorina ny hoavinay, am-pilaminana, am-pitoniana ary amim-pahamarinana. ” – Volodymyr Zelenskyy
“Tena mirehareha izahay fa manana ambaratonga ambany ny anti-Semitism - ambany dia ambany ny anti-Semitism any Ukraine mahaleo tena…” – Volodymyr Zelenskyy
“Tena mirehareha izahay fa manana ambaratonga ambany ny anti-Semitism - ambany dia ambany ny anti-Semitism any Ukraine mahaleo tena, izay nanomboka ny fiainany tamin'ny 1991." – Volodymyr Zelenskyy
"Isika amin'ny maha-firenena antsika dia manana zavatra ianarana avy amin'i Isiraely, indrindra eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fiarovana, ary mazava ho azy fa hanao izany izahay." – Volodymyr Zelenskyy
“Efa 30 taona izahay no niandry an’izany. Androany [28 Febroary 2022], nanao sonia ny fangatahana ho mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana aho. – Volodymyr Zelenskyy
“Nahazo ny zonay hiaraka amin'ny rehetra any Eoropa izahay. Amin'ny teny mitovy. Efa nalefa tany Bruxelles ny fangatahana ary voasoratra ara-panjakana. ” – Volodymyr Zelenskyy
"Tsy maintsy lasa Islandey amin'ny baolina kitra isika, Israeliana amin'ny fiarovana ny taninay, Japoney amin'ny teknolojia." – Volodymyr Zelenskyy
"Tokony hampiseho an'i Chernobyl amin'izao tontolo izao isika: mpahay siansa, manam-pahaizana momba ny tontolo iainana, mpahay tantara ary mpizaha tany." – Volodymyr Zelenskyy
“Isika Okrainiana dia firenena milamina. Fa raha mangina isika anio, dia ho lasa isika rahampitso!” – Volodymyr Zelenskyy
“Hangorina ny firenena misy fahafahana isika, izay mitovy ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna ary ny fitsipika rehetra dia marina sy mangarahara, mitovy ho an'ny rehetra. Ary noho izany dia mila olona manana fahefana hanompo ny vahoaka isika. – Volodymyr Zelenskyy
“Rehefa mifampiresaka ny Okrainiana sy ny Israeliana, dia samy mifanaja ny andaniny sy ny ankilany.” – Volodymyr Zelenskyy
“Iza no vonona hiady miaraka amintsika? Tsy mahita olona aho. Iza no vonona hanome an'i Okraina antoka ho mpikambana ao amin'ny OTAN? Matahotra ny rehetra.” – Volodymyr Zelenskyy
“Nahoana i Poroshenko no mandeha amin'ny fe-potoana faharoa? Mba tsy hahazoany voalohany. – Volodymyr Zelenskyy
“Ianao [Vladimir Putin] dia lazaina fa hanafaka ny vahoakan'i Okraina ity lelafo ity, fa afaka kosa ny vahoaka Okrainiana.” – Volodymyr Zelenskyy
“Ianao [Vladimir Putin] dia lazaina fa Nazi izahay. Saingy afaka manohana ny Nazia ve ny vahoaka iray izay nanome aina mihoatra ny valo tapitrisa noho ny fandresena ny Nazisma? Ahoana no ahafahako ho Nazi? Lazao amin’ny dadabeko, izay nandalo ny ady manontolo tao amin’ny tafika sovietika ary maty tamin’ny naha-kolonely tany Ukraine mahaleo tena.” – Volodymyr Zelenskyy
"Tsy afaka mieritreritra ny eran-tany ianao ary manakimpy ny masonao amin'ny antsipiriany." – Volodymyr Zelenskyy
Ahoana ny fampiasana chat amin'ny tranokala ho an'ny famoronana fitarihana